Shiinaha Model No: Soo-saarista Shiinaha Is-xakameynta otomaatiga ah ee Y81 Taxanaha Kaydinta Qalabka Mashiinka Aluminium Baler Aluminium ee warshad dib-u-warshadaynta birta iyo alaab-qeybiyeyaasha | Midow Sare
Qaab No: Soosaarida Shiinaha Is-xakameyn otomaatig ah Y81 Taxanaha Kaydinta Qalabka Mashiinka Aluminium Baler Aluminium ee Qalabka Dib-u-warshadaynta Birta
Y81 Taxanaha birta korantada leh ee qaabdhismeedka xiran, taarikada dharka sare leh iyo daboolka albaabka oo leh gogol goyn, taas oo xiijin karta haraaga weyn si ay u yaryihiin iyo sidoo kale gaaritaanka horudhac. Mashiin kasta waxaa lagu xakameyn karaa gacanta ama si otomaatig ah.
Model Y81 Taxanaha
Cadaadiska Haydarooliga 100-3000 Tan
Xajmiga Bale 300 * 300 mm ama Custom
Cabirka qolka 1200 * 600 * 700 mm ama Custom
Out-bale way Horay u sii daa Ballan bixi dallaal Iska sii daa
Howlgalka Buugga gacanta ama PLC
Mashiinka qashinka birta ah ee mashiinka wax lagu shubo ee birta ah wuxuu leeyahay faa'iidooyin wanaagsan warshadaha dib u warshadaynta birta. Maalmahan, yaraanta ilaha dhaqaale ee la heli karo waa dhibaato dal kasta soo foodsaarta. Macno malahan wadamada soo koraya ama horumaray, sida loo sameeyo dib u warshadeynta ugu fiican had iyo jeer waa mowduuc kulul. Marka waxaan u qaabeyneynaa dhammaan noocyada mashiinka balastarka biraha ee macaamiishayada si ay ula macaamilaan birtooda duugga ah si ay ula kulmaan shuruudaha macaamiisheena.
Baler Haydarooliga si hufan wax uga qaban kara dhammaan noocyada kala duwan ee qashinka birta ah, xiirashada biraha, xaashida birta, aluminium, naxaas iyo lacag-bixinno kale oo u qalma oo lagu miiray afargeesle, dhululubad, qaab octagonal iyo qaabab kale si loo yareeyo kharashka gaadiidka iyo dhalaalida waxayna hagaajin kartaa xawaaraha foornada.
● Gawaarida Haydarooliga, hawlgalka oo habsami leh iyo buuq la'aan, xawaaraha xawaaraha dhaqaaqa, xoojinta balaaran ee balaaran, baaxada is haysta, ma fududa in lakala baxo.
Shaabadda silsiladda waxay korsataa giraanta GRAI ee la soo dejiyey, taas oo leh waxqabad wanaagsan oo wax lagu xiro iyo caabbinta cadaadiska adag
Ual Manual ama PLC xakamaynta otomaatigga ah way fududahay in la shaqeeyo lana ilaaliyo.
● Macaamiisha ayaa dooran kara awoodda korantada ama mashiinka koronto dhaliyaha ku shaqeeya ee naaftada ah, mashiinka naaftada ayaa kaa caawin kara inaad ku guuleysato bir birqaabaysa.
Machine Mashiinkayaga mashiinka korontada ku shaqeeya wuxuu kaa caawin karaa inaad badbaadiso foosha, hagaajiso soo kabashada birta, kordhinta qiimaha iibka iyo hagaajinta faa'iidada.
● Waxay kaa caawin kartaa inaad keydiso aagga shaqada, waxay faa'iido u leedahay maareynta goobta.
● Waxay kaa caawin kartaa inaad yareyso kharashka gaadiidka, iyo inaad hagaajiso waxqabadkaaga shaqo
Faahfaahinta Mashiinka Birta Baler Haydarooliga Details
Xoog Magaca (Ton)
Cabbirka qolka (L × W) mm Xajmiga Bale (L × W) mm Awood (KW)
Mashiinkayaga Mashiinka Badeecada ee Baaskiilku wuxuu bixiyaa qaybo caan ah oo caan ah, waxaan la shaqeyn jirnay shirkado badan oo caan ah oo caan ah, sida SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI iyo wixii ka badan 10 sano.
Mashiinkayaga mashiinka korontada ku shaqeeya ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha soo socda:
Industry Warshadaha dib-u-warshadaynta birta, mashiinkeenna birta korontada ku shaqeeya ayaa ka dhigi kara birta duugga ah bales laba jibbaaran,
Industry Warshadaha kala furfurida baabuurta, mashiinka baalal-dhaliyaha birta ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa in lagu cadaadiyo jirka gaariga duugga ah.
Industries Warshadaha macdanta birta iyo dhalaalida, xoogaa warshad bir ah ama qashin bir ah inta lagu jiro wax soo saarka waa la cadaadin karaa.
Industry Warshadaha qalabka. Waxyaalaha birta ah ee duugga ah qaarkood waxaa lagu cadaadin karaa mashiinka birta ku shaqeeya ee biraha korontada ku shaqeeya.
Industry Warshadaha mashiinka soo saara. Baakadaha iyo isugeynta burburka, qashinka, budada iyo walxaha kale ee birta ayaa wax weyn ka taraya deegaanka aqoon isweydaarsiga, dib u warshadeynta qashinka iyo ka faa'iideysiga shaqaalaha.
Waxaan u isticmaali doonaa baakadaha filimka la duubay iyo baakadaha alwaaxda ah si aan u ilaalino mashiinka qashin-qubka birta ah.
Daawo Mashiinka Baler-ka Haydarooliga ee Dib-u-warshadaynta Birta ee Waxqabadka!
Hore: Qaab No: Soosaarida Shiinaha Is-xakameyn otomaatig ah Y83 Taxanaha Haydarooliga Birta Chip Briquetting Mashiinka Mashiinka ee Dib-u-warshadaynta Birta
Aluminium Baler Mashiinka
Qaabeeyaan Maya: Taxanaha CBJ jabinta balastarka haraaga ah ...
Qaab No: Xakamaynta Buugga Soosaarida Shiinaha Y8 ...
Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah, Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Sheet Birta Baler, Baler Xadhig Baler, Mashiinka Birta Briquette,